PdaNet+ 5.21 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.21 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး PdaNet+
PdaNet+ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဗားရှင်း 5.10 ကိုအဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုရှိပါတယ်, အပ်ဒိတ်မလုပ်မီကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါရှိရမည်။
1. Windows ကိုဘက်ကိုလည်း http://pdanet.co/install ကနေ update လုပ်ပေးခြင်းလိုအပ်ပါတယ်
သင်ဆဲပဲ Play Store မှ install လုပ်ပါကလိုအပ်တယ်ဆိုရင် 2. မူရင်း Wi-Fi Hotspot အင်္ဂါရပ်လွတ်လပ်သော FoxFi app ထဲမှာနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်း http://pdanet.co/install/old မှာ Pda Net ဟာ + ၏ယခင် (4.19) version ကိုရှာတှေ့နိုငျ
ကြောင့် Wi-Fi စကင် API ကိုခေါ်ဆိုရန်အန်းဒရွိုက်ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့် 3. နယူးတည်နေရာခွင့်ပြုချက်။
အမြစ်မစွဲ access ကိုအတူ app တစ်ခုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန့်အသတ်ရှိပါတယ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ ကျနော်တို့ခွဲဝေမှုကိုဖုန်းတွင်အင်တာနက်များအတွက် "ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးအဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်" ကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမယ့်တစ်ဦး "စံပြ" သို့မဟုတ် "စကွဝဠာ" ဖြေရှင်းချက် (ဥပမာသာမန် Wi-Fi Hotspot) မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
===== Wi-Fi Direct Hotspot (အသစ်!) ====
Pda Net ဟာ + ယခုအားလုံးအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ 4.1 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့လုံးဝအသစ်က "Wi-Fi Direct Hotspot" အင်္ဂါရပ်နှင့်တကွကြွလာ။ ဒါဟာသင် Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ဖုန်းကွန်ပျူတာများနှင့် tablet ချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်သင်ကဖုန်းကိုချိတ်ဆက်နေကြတယ်ဆိုတာကို device ကိုပေါ် မူတည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကို app သို့မဟုတ် setup ကို proxy ကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်စေသငျသညျမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေကိုအသာပုတ်ပြီးတော့ Pda Net ဟာ + ထဲမှာ "Wi-Fi Direct Hotspot" ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ် "ကိုကူညီပါ!" အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ခလုတ်ကို။
* သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာနှစ်ခုအမှုတို့ကိုပြုကျေးဇူးပြုပြီးချိတ်တွဲစဉ်အတွင်းဟော့စပေါ့ကိုမမွငျပါဘူးဆိုရင်: ဖုန်းပေါ်မှာ 1. ပြန်လည်စတင်ပါ Hotspot ။
"Show ကိုအားလုံး Wi-Fi Direct Hotspot on" 2. ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ adapter5GHz ထောက်ပံ့လျှင်၎င်းသည်အတည်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။
==== FoxFi / Wi-Fi Hotspot Mode ကို (ဟောင်း) ====
သင်ဆဲကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မူရင်း Wi-Fi Hotspot အင်္ဂါရပ်လွတ်လပ်သော FoxFi app ထဲမှာနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာကြောင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော updates များကိုအများအပြားအသစ်များဖုန်းကိုမော်ဒယ်များအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်စဲခဲ့သည်။ ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်တောင်မှသည့်အခါ, သင့်ဟော့စပေါ့အသုံးပြုမှုနေဆဲ (အောက်တွင်အစီအစဉ်ကို2ကိုကြည့်ပါ) metered နိုင်ပါသည်။ Wi-Fi Direct Hotspot နှစ်ဦးစလုံးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ဘူး။ သို့သော် feature အသစ်ဂိမ်းစက်များ, တီဗီသို့မဟုတ်တီဗီ streaming များ devices တွေကို support ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။
===== ကို USB Mode ကို =====
USB မှတ် mode ကို (အချို့ ZTE က / Alcatel မော်ဒယ်များ မှလွဲ. ) အားလုံးကို Android ဖုန်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာ Windows သို့မဟုတ် Mac ကနေ connection ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်သည်အခြား devices များနှင့်အတူ Pda Net ဟာအင်တာနက်ကိုဝေမျှနိုင်အောင်နောက်ထပ်တစ် Wi-Fi Hotspot သို့ Windows ကိုဖွင့်နိုင်မယ့် "Wi-Fi ဝေမျှမယ်" အင်္ဂါရပ်လည်းမရှိ။
* သင့်ရဲ့ဖုန်းကို USB ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်သင်၏ကွန်ပျူတာကအသိအမှတ်ပြုမထားလျှင်, ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး http://pdanet.co/driver
===== ဘလူးတုသ် Mode ကို =====
ဘလူးတုသ် mode ကိုယခုပေါရာဏနှင့်သင်မယ့်အစား Wi-Fi Direct Hotspot အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဘလူးတုသ် mode ကိုအနာဂတ် updates များကိုထဲမှာပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။
===== ငါသည်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုအပ်ပါသလား =====
အဆိုပါ Pda Net ဟာဆော့ဖ်ဝဲကိုစုစုပေါင်းသန်း 30 ကျော် downloads, အတူ 2003 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံး Treo smart ဖုန်းဝန်းကျင်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်, ကညာဘက်ကိုလူတိုင်းလိုတစ်ခုခုဖြစ်ရပါမည်နည်း ကောင်းပြီ ... ဒါကြောင့်တကယ်သင်၏ဖုန်းများအတွက်သင်ရှိသည်ဒေတာအစီအစဉ်၏ကြင်နာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အများဆုံးသယ်ဆောင်ထံမှဒေတာများကိုအစီအစဉ်များကို4မျိုးရှိပါတယ်:
1. (ကန့်သတ်သို့မဟုတ်န့်အသတ်) သင့်ရဲ့ဒေတာအစီအစဉ် (ကသင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုပဌနာရန်သင့်အားပြ) သင်ဖုန်းပေါ်တွင်မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ feature ကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။
2. သင့်ရဲ့ဒေတာအစီအစဉ်န့်အသတ်နှင့်သင်အသုံးပြုသင့်ဖုန်းမှမိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟော့စပေါ့အသုံးပြုမှုတစ်ဦးထုပ် (5G / လဟုပြော) ဆန့်ကျင် "ငွေပေးရသည့်" ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနောက်မှအမြန်နှုန်းတစ်တွားမှရပ်စဲခံနေရသည်လိမ့်မည်။ (FoxFi ဒီကိုရှောင်ရှားမရနိုငျ!)
3. သင့်ဒေတာအစီအစဉ်န့်အသတ်သည်, သငျသညျန့်အသတ် LTE ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်မျှမတို့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာထုပ်နှင့်အတူသင့်ဖုန်းမှမိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဤအစီအစဉ်တည်ရှိမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်မထားဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကခွင့်ပြုမှအချို့သောဖုန်းကိုမော်ဒယ်များအပေါ်လစ်ကွက်ဟာကွက်မြင်ကြပြီ။
4. သင်ဟာဒေတာအစီအစဉ်ကန့်သတ်နှင့်သင့်ဖုန်းမှမိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့အသုံးပြုမှုတူညီတဲ့ data တွေကိုအစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်အောက်မှာတတ်၏။
သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကို 1 သို့မဟုတ်2နှစ်အောက်ကျရောက်လျှင်, သင် Pda Net ဟာ + သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကို3သို့မဟုတ်4ပိုင်ဆိုင်လျှင် Pda Net ဟာ + မဆိုခြားနားချက်စေမည်မဟုတ်။ သင်တိုစီစဉ်ထားသောအရာကိုမသေချာလျှင်, အမြဲတမ်း Pda Net ဟာ + သုံးစွဲဖို့ထိခိုက်နစ်နာစေမည်မဟုတ်။
Pda Net ဟာ + အခမဲ့ထုတ်ဝေမဟုတ်ရင်ကအပြည့်အဝဗားရှင်းအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, အသုံးပြုမှုကန့်သတ်အချိန်ကုန်ဆုံးကြပါလိမ့်မယ်။
Sprint နှင့် AT & T ကသငျသညျ Play Store မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို install လုပ်ခွင့်ပြုမပြုစေခြင်းငှါ, http://pdanet.co/install မှတိုက်ရိုက် apk ဖိုင်ကို install လုပ်ပါသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဘက်မှ install လုပ်ပါ။
PdaNet+ အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PdaNet+ အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PdaNet+ အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PdaNet+ အား အခ်က္ျပပါ
feloniousnims စတိုး25.43k
PdaNet+ ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PdaNet+ အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ June Fabrics Technology Inc.
Release date: 2019-06-12 09:22:54
လက်မှတ် SHA1: 80:04:36:C7:CD:01:7E:2B:E0:58:B2:DC:7C:3F:08:00:89:EF:A5:5A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): CM
အဖွဲ့အစည်း (O): June Fabrics Technology Inc.
နယ်မြေ (L): Virginia
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Virginia
PdaNet+ APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ